Kwenzakalani kanti vele ngathi kwezemidlalo, ngabe kushoda kuphi ngampela?
Nami ngithi angibhonge emuswaneni ngemidlalo yama-Olympics ebeyibanjelwe kwelaseJapan. Cha libukisile ngathi iqembu lethu ebelithunyelwe ukuthi liyosimela eTokyo futhi sekumele sivume ukuthi ayisekho indaba yethu kwezemidlalo.
Sonke besinalo ithemba lokuthi sizokwenza kangcono kule midlalo ngemuva kokubuya nezindondo eziyishumi ngonyaka ka-2012 eLondon kodwa kulo nyaka sibuye nezindondo ezintathu nje kuphela.
Miningi imibuzo enginayo kodwa angazi izophendulwa ubani. Kusobala ukuthi besingakulungele ukubamba iqhaza kule midlalo, umbuzo enginawo uthi kwenzeka kanjani ukuthi sihluke ukulungiselela imidlalo ebanjwa njalo ngemuva kweminyaka emine.
Futhi kulo nyaka kuze kwengezwa ngonyaka owodwa ngoba le midlalo bekufanele ibajwe ngonyaka odlule kodwa ngesimo salo mkhuhlane ogubezele umhlaba wonke kwaphoqa ukuthi ihlehle.
Zonke iziphathimandla zezinhlaka ezehlukene kwezemidlalo zikhombana ngeminwe manje. Asikwazi ukucasha ngokuthi isikhathi sokulungiselela ukuyodlala le midlalo saba sincane kakhulu ngenxa yeCovid-19.
Lo mkhuhlane ugcwele umhlaba wonke kodwa amanye amazwe akwazile ukwenza konke okusemandleni ukkwenza isiqiniseko sokuthi bayilungele imidlalo.
Ngiyakubona ke okwebhola lezinyawo ngoba vele liyasehlula kodwa ngiphoxeke kakhulu ngokuhluleka kwabagijimi bakithi kanjalo nababhukudi ngoba yibona abajwayele ukusibuyela nezindondo.
Besivuka entathakusa sifuna ukuzibonela abantu abafana noChad Le Clos, Akani Simbine noWayde Van Niekerk ukubala nje abambalwa kodwa sonke sakhalela ubuthongo bethu ngesikhathi besiphoxa.
Asikwazi ukugxeka abadlali ngoba bakwenzile okusemandleni ukubuya nezindodo. Ngempela asikwazi ukulindela okukhulu kubona ngoba izinto zonakele emuva.
Kwavalwa imidlalo emazingeni aphansi nasezikoleni. Sizobathola kanjani ke ompetha bomhlaba uma zingagqugquzelwa izingane ukuthi zizibandakanye nezemidlalo uma zincishwa amathuba?
FUNDA NALA: ISundowns Ladies iyabukisa kwiSuper League ngesibhaxu
Ezindaweni zasemakhaya azikho izinsiza zokufukula ezimdlalo ngoba uhulumeni wethu uhambela kude. Ngikhuluma nje iqembu lethu leHockey kuthiwa alilutholanga uxhaso kuhulumeni kwaze kwaphoqa ukuthi bazibonele ukuthi bayihlanganisa kanjani imali yokwenza amalungiselelo ale midlalo.
Bekusipikili sokugcina lesi. Siphelile isithunzi sethu kwezemidlalo emhlabeni ngoba phela thina besihlonishwa uma kuza kuma-Olympics.
Mina ngithi kungcono sivele sihoxe emidlalweni elandelayo ngoba vele sisuke siyokwengeza izibalo nje, hhayi ukuyoncintisana namanye amazwe. Uhulumeni wethu akanandaba netsha yakithi kwezemidlalo.
Previous Previous post: ISundowns Ladies iwadlisa ngamapayipi amaqembu kwiSuper League
Next Next post: UPetersen uqgugquzelwa ukuncintisana konozinti kwiChiefs